Ingabe indiza ye-beaver isiza ngesifo sikashukela: ukubuyekezwa kokwelashwa > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Beaver Spray yesifo sikashukela
Ukusakazwa kwe-beaver kushukela, ukusetshenziswa kwayo okuqale eRussia ngaphansi kwePrince Alexander Nevsky, kuthathwa njengomuthi wemvelo osebenzayo.
I-Beaver tincture isetshenziswa ekwelapheni nasekuvimbeleni ukuthuthukiswa kwama-pathologies amaningi abantu ahambisana nezinhlelo zenhliziyo, zezinzwa nezinhlelo zokugaya ukudla. Ngaphezu kwalokho, isetshenziswa empini yokulwa nezifo zesikhumba kanye nezinsolo ezinomdlavuza.
Isipiliyoni sokuphiliswa ngokugeleza okuhle kokhokho bethu kanye nogogo bethu baba isisekelo sokusetshenziswa kwayo kwezokwelapha zendabuko. Ucwaningo lwesayensi luveze ukuthi luhlanganisa amakhemikhali, ngaleyo ndlela luhlanganisa izifo eziningi, ikakhulukazi isifo sikashukela.
Izici zokuphilisa zomjelo we-beaver
Ijetti ye-beaver (noma i-castoreum) iyimfihlo ekhushulwe kwizindlala zesilwane ukumaka indawo. Isisindo esinsundu esinsundu esinephunga lomaskandi netha.
Kwabesifazane nabesilisa, ezansi komsila, kukhona isitho esibunjiwe esenziwe ngeparele esinesisindo esingama-200 g. Iningi labafundi lithi igama elithi "iron" alilungile. Lokhu kungumzimba obhekele izinqubo eziningi emzimbeni wesilwane.
Iziphi izimfanelo zokuphiliswa onazo umfudlana omuhle? Ukuze wenze lokhu, cabanga ngokwakhiwa kwamakhemikhali. Kucebile ezintweni ezinjalo:
Amafutha abalulekile nama-resins, ngakho-ke imfihlo isetshenziswa kumakha.
I-Beaver itshe ne-castorine, okuthi lapho ichitheka otshwala, yakhe izixazululo ze-colloidal ezisetshenziswa kwezidakamizwa eziningi.
I-salicylic ne-benzoic acid, okuyizinto eziyinhloko.
Ama-enzymes ayizingxube zemvelaphi yamaprotheni.
Ama-macronutrients, ahlanganisa i-calcium, i-potassium, i-sodium nabanye.
Izinto zokulandela, okuqukethwe okuphezulu kakhulu kwensimbi, ithusi, i-zinc, i-manganese, i-aluminium.
Inani elikhulu lama-micronutrients - i-titanium, i-nickel ne-silicon.
Uma umuntu ethatha umfudlana we-beaver, uzowuthinta umzimba wakhe ngokulandelayo:
kuqinisa izindonga zemithambo yegazi
dambisa ukuvuvukala kwemikhawulo,
kuqinisa umfutho wegazi
bonisa izakhiwo ze-anti-antibiotic
ukusiza ukululama ngemuva kokuhlinzwa
izovusa ukusebenza ngokomzimba nangokwengqondo.
Ngaphezu kwalokho, ukusakazwa kwe-beaver ne-mellitus yesifo sikashukela kuhlobene ngqo. Isisusa esabiwe semfihlo yangaphandle siyathathelwa ukuphazamiseka okuhlukahlukene kohlelo lwe-endocrine. Ukusetshenziswa kwaso kusebenza kahle ekushintshashintsheni kwamazinga kashukela nasezimweni ezinzima zesifo.
Futhi, indiza ye-beaver isiza ukuqinisa imetabolism ye-carbohydrate. Njengoba uhlobo lwe-1 yesifo sikashukela lincike kwe-insulin, ukusetshenziswa kwezinye izindlela zokwelapha kungangezwa kuphela ukuqinisa ukungatheleleki komzimba.
Ngendlela yesibili yesifo sikashukela, le mfihlo inomphumela we-hypoglycemic, kwesinye isikhathi ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Ukusetshenziswa komsinga we-beaver ekwelapheni isifo sikashukela namanye ama-pathologies amaningi
Izindlela zokwelapha zemvelo bezilokhu zisebenza nabaphilisi nabaphilisi bezikhathi zakudala nezesikhathi esedlule.
Futhi manje, umuthi osemthethweni usebenza ukwelashwa kwezifo eziningi ngezidakamizwa ezisuselwa kwizithako zemvelo.
Okuningi kulahlekile ngokuhamba kwesikhathi nokushintshwa kwezimbali nezilwane. Amanye amakhambi esintu angasebenza izimangaliso ezinhlelweni zezempilo ayatholakala esintwini namuhla.
Ukusakazwa kwe-beaver noma i-beaver musk iyi-adaptogen enamandla, eqashelwa umuthi wendabuko, nekhambi elinamandla lezifo eziningi. Ngisho nokusakaza kwe-beaver kutholile ukusetshenziswa ku-mellitus yesifo sikashukela.
Ukusakazwa kwe-beaver kuyinto enephunga elimnandi ngombala onsundu nokungaguquguquki kwamafutha, okukhiqizwa yizindlala ze-beaver. Kunegama layo lesayensi - i-castoreum.
Imisebenzi yezindlala ukugcina umsoco ngesikhathi sendlala, ukulimala, noma ukugula. Ukuba khona kwenani elikhulu lamakhambi okwelapha ekudleni kwe-beaver kusiza ukwanelisa okuqukethwe yilezi zindlala ngenqwaba yezakhi ezilusizo.
Ukususa lezi zindlala ezibunjiwe akunakwenzeka ngaphandle kokubulala isilwane, ngakho-ke imikhiqizo yezinkampani ezithengisa izidakamizwa ngokususelwa ku-castoreum futhi ithi into etholakala kuma-beaver bukhoma, ayihlobene nomsinga we-beaver.
Ukuze uthole izinto ezisetshenziswayo ezisezingeni eliphakeme, abavukuzi kumele bahambisane nobuchwepheshe bokuvuna. Izindlala, ezisuswa masinyane ezilwaneni ezivele zifile futhi zisuswe ekuthambekeni kwamanye amazwe, zibaluleke kakhulu.
Zigcina imishanguzo yemvelo nama-antiseptics ekwakhiweni kwayo futhi ayonakalisi ngenkathi inqubo yomiswa.
Insimbi eyomile iyindlela ehlanzekile yokuqothuka yomile. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kungaphulwa bese kusetshenziswe njenge-tincture ku-vodka.
Kwaphela inyanga, uketshezi lufakwe endaweni emnyama, epholile futhi ngezikhathi ezithile uyazamazama. ads-mob-1
Umuthi ophuma ku-beaver musk uqukethe inani elikhulu lezinto ezisetshenziswayo kwezokwelapha zendabuko:
i-salicylic ne-cinnamic acid,
ama-steroid ahlukahlukene nokuningi.
Ngenxa yokuthi izingxenye zezakhi eziyinkimbinkimbi ze-organic zibuthana emithanjeni eyeqisayo, zikhulule kakhulu ukuphulukisa nokwakha kabusha.
Ukwemukelwa kwento edingidwa kusuka kwizindlala kunconyelwa imithwalo ekhuphukayo kanye nokukhathala okucindezelayo, nge-avitominosis kanye nezifunda ezinde zokucindezela.
Ngaphambi kokuqalwa kweViagra, ukusakazwa kwe-beaver kwakuyi-aphrodisiac evamile yemvelaphi yemvelo yabesilisa nabesifazane.
Isetshenziselwa ukubuyisela amandla, ukuthuthukisa impilo jikelele kanye nokwandisa amandla. Ukugqugquzeleka kwe-metabolism, kusebenza ukulondolozela ubusha nobuhle, umphumela wezimonyo omenyezelwe - konke lokhu kungaphakathi kwesikhundla se-castoreum. izifo ezinzima.
Umphumela oyinkimbinkimbi we-beaver musk kumuntu ukwelashwa okuhle okwengeziwe kwekhosi ye-laser ne-chemotherapy.
Umphumela wayo we-immunomodulatory ubonakala kuwo wonke umzimba wonke, uthuthukisa umsebenzi wawo, ukhulisa amandla okubekezelela izinto eziphikisayo futhi uhambisane nokugula ngemuva kokugula.
Ububanzi bomfudlana we-beaver ufinyelela emaqenjini amakhulu wezifo:
izifo zesistimu yenhliziyo: ukuhlaselwa yisifo senhliziyo, ukushaya kwenhliziyo, imithambo ye-varicose, ischemia, umfutho wegazi ophakeme, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, ukulimala kwenhliziyo, izilonda ze-sclerotic of artery nokunye,
ukuphazamiseka kwe-endocrine: ikakhulukazi uhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. Kuyaqapheleka ukuthi ukusakazwa kwe-beaver sekufakazele okuhle ikakhulukazi ngohlobo 2 sikashukela, ngoba kunomthelela ekunciphiseni isisindo. Ngohlobo 1 sikashukela, lungasetshenziswa ukuqinisa ukungavikeleki komzimba,
Izifo ze-emathunjini: i-hepatitis, i-gastritis, i-enterocolitis, i-cholecystitis, i-pancreatitis nabanye,
izifo ezithinta izitho zofuzo emadodeni: i-adenoma, i-prostatitis, ukungabi namandla, i-urethritis, ukungazali, ukuvuswa komzimba kwangoko,
izifo nezinqubo zokuvuvukala zohlelo lwezitho zofuzo kwabesifazane: ama-cysts ama-ovarian kanye nesizalo, amathumbu, ama-fibroids, ukungahambi kahle kokuya esikhathini,
izifo ezahlukahlukene zezinso: psoriasis, pyelonephritis, cystitis, urolithiasis,
izifo zohlelo lwe-bronchopulmonarynjengesifo sofuba, i-bronchitis, i-pneumonia, i-pleurisy, i-silicosis, i-Beck sarcoidosis kanye ne-emphysema,
Izifo zohlelo lwesisu: imiphumela ehlukahlukene yokulimala, i-fractures, ama-sprains kanye nokunye ukulimala, i-arthritis, i-arthrosis, i-osteoporosis, njll.
I-Migraine nokuqina kokuqina ohlelweni lwezinzwa nakho kuphiliswa yinkambo yokwelashwa ngomfula we-beaver. Kwezinye izimo, umuthi ubangela ukuthuthukiswa kokuzwa nokubuka uma usetshenziswa ngaphandle. Izikhangiso-mob-1
Ukwelashwa ngokugeleza kwe-beaver kudinga indlela yomuntu ngamunye esimweni ngasinye. Umthamo kanye nobude bokuphatha bunqunywa ngokuya ngobude nesisindo somuntu.
I-Beaver Musk Tincture
Iphunga elithile nokunambitheka komkhiqizo kungafihlwa ngokuwucoca nge-chicory noma ikhofi. Umthamo ojwayelekile uqukethe izinkabi ezintathu zokufakwa, ezisatshalaliswa kathathu ngosuku.
Lapho uthatha umuthi ngezinhloso ze-prophylactic, isipuni esisodwa ekuseni nakusihlwa kwanele. Umuthi wakusihlwa kufanele wenziwe okungenani amahora amathathu ngaphambi kokulala ukuze ugweme ubunzima bokulala.
Isimo esiyinhloko sokusetshenziswa okulungile kokusakazwa kwe-beaver ukunamathela ngokuqinile kumthamo kanye nokuvama kokuphatha.
Akukho cishe ama-contraindication ongawasebenzisa, ngoba umuthi ungokwemvelo ngokuphelele futhi umunwa ngokuphelele ngumzimba.
Okuwukuphela kwento engahle ibe yinkinga yokungezwani nezakhi zomuthi. Ukuyikhomba, udinga ukubhekisisa isimo somzimba nokuphila kahle konke. Izingane, abesifazane abakhulelwe nabakhanyayo kufanele basebenzise lesi sidakamizwa ngokuqapha.
Ukungethembeki ezindleleni nasekwelashweni kwemithi ehlukile kuholele ekulahlekelweni kokupheka okuningi okuwusizo kwasendulo. Kepha labo, usizo lwayo obekulokhu kucace bha, alisoze lalibaleka lalahleka kuze kube phakade. Ngakho-ke, ingabe ukusakaza kwe-beaver kusiza ngesifo sikashukela nezinye izifo? Mayelana nokwelashwa kwesifo sikashukela esinomfula we-beaver, ukubuyekezwa kukuhle kakhulu. ads-mob-2
Abantu bakha umbono ozinzile nodumo lwezindlela eziphumelela kakhulu zokwelapha abantu, ezifaka ukusakazwa kwe-beaver:
Njengoba sesishilo, indiza ye-beaver isiza ngesifo sikashukela, i-prostatitis, umfutho wegazi ophakeme nezinye izifo eziningi. Futhi ukuthi uwuthatha kanjani umuthi, bheka ividiyo:
I-Beaver Spray yesifo sikashukela - Amandla okupholisa weDrug
E-Russia, kwakusetshenziswa umfudlana we-beaver ukwelapha izifo eziningi ngaphansi kuka-Alexander Nevsky. Futhi namhlanje leli khambi le-homeopathic alilahlekanga ukubaluleka kwalo. I-tincture yotshwala isetshenziselwa izifo zenhliziyo, imithambo yegazi, izitho zokugaya ukudla, isistimu yezinzwa. Umuthi osebenzayo wezifo zesikhumba kanye ne-oncology.
Ukusakazwa kwe-beaver kushukela kuyisidakamizwa esibalulekile esidambisa imiphumela yezinkinga zesifo sikashukela: kusuka emithanjeni ye-varicose yezinkinga ezinamaphethelo aphansi kuya ngengozi yokuhlaselwa yi-cerebrovascular nge-ischemia.
ICastoreum, njengoba odokotela beyibiza ngama-waterfowl rodent, imfihlo yezitho zesilo eziba yingxenye yokumaka indawo yazo. Isikhwama esimnyama esinsundu esinephunga elimnandi le-musk ne-tar sigcwele okuqukethwe okufana nesihlabathi esimanzi. Isitho esimbozwe ngopende phakathi kwawo womabili ubulili sitholakala ngaphansi komsila. Abantu abaningi babiza lesi sitho ukuthi sinesisindo esingama-200 g glands, kepha asigcini nje ngokufihla uketshezi, kodwa futhi sibamba iqhaza ezinqubweni eziningi ezibalulekile zesilwane.
Ukuqonda ukuthi kusebenza kahle kanjani ukusakazwa kwe-beaver kushukela, kuyadingeka ukuthi ufunde ukwakheka kwe-biochemical yomuthi. Umuthi uqukethe izinto ezingaphezulu kwamashumi amahlanu eziyinkimbinkimbi ezisebenzayo - ama-alcohols, ama-phenols, uwoyela onephunga elimnandi kanye:
Ama-asidi ama-salicylic ne-benzoic - izinto eziyisisekelo,
Amafutha abalulekile nama-resins - okukhishwe kusetshenziswa ngabenzi bamakha,
Ikamela le-Beaver ne-castorine - ikhambi le-colloidal elinotshwala elisetshenziswa emithini eminingi,
Ama-enzymes yizinto ezinemvelo yamaprotheni,
Amaminerali - ngesimo se-potassium, i-sodium, i-calcium, i-zinc, yethusi, i-iron, i-aluminium, i-manganese, i-titanium, i-nickel ne-silicon.
Ngokuya ngendawo yokuhlala kwamagundane ama-waterfowl, kanye nesikhathi sokuzingela nokudla kwe-beaver, ukwakheka komkhiqizo omningi kungahluka. Umuthi wesikhathi eside unomthelela oyinkimbinkimbi emzimbeni:
Kuthuthukisa ukunikezwa kwegazi - capillary and general,
Kwandisa ukuqina kwezindonga zemithambo,
Ikhumbula ukuvuvukala kwemilenze,
Ijwayele umfutho wegazi
Inemiphumela yokulwa ne-antibacterial and anti-inflammatory,
Kuqinisa amasosha omzimba
Ilungiselela ukuzivumelanisa nezimo esikhathini sokusebenza,
Kushukumisa umsebenzi wobuchopho nemisipha.
Yonke le miphumela yenza ukuba sikwazi ukwelapha iqembu elibanzi lezifo zemvelo yokuvuvukala nokuwohloka, i-pathologies yenhliziyo. Umphumela wokuhluleka ukuphepha ubonwa yi-homeopaths nge-impotence ne-prostatitis. Naphezu kwekhono lokuvuselela ukugeleza kwegazi, umuthi awukhuphi umfutho wegazi. Futhi nge-hypertension, ngisho nomphumela ophambene uyabonakala: umfutho wegazi wejwayelekile. ICastoreum iziveze kahle ngemithambo ye-varicose, ethinta abanesifo sikashukela abaningi.
Kuyaphawuleka ukusebenza kwama-tincture kwengozi ye-acute cerebrovascular ajali (CIC). Ukuphuculwa kwalesi simo kubonakaliswa ekutholakaleni kwe-ischemic zone: Ukunikezwa kwegazi kwe-capillary kuyabuyiselwa, ukulimala okuvela ku-pathology kuyancishiswa. I-castoreum esheshayo imiselwe i-NMC, okuphezulu ukusebenza kwayo.
Kuthuthukisa umuthi we-drug and carbohydrate metabolism, lokhu kuvumela kwezinye izimo ukulawula ushukela ezinhlotsheni zesibili noma ngaphandle kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela. Ngefomu lokuqala, umfudlana we-beaver usetshenziswa njengesengezo esisebenzayo ukusekela ubungqabavu, umuthi awusiwona obambele i-insulin.
I-tincture yotshwala (70 °) ingathengwa ekhemisi noma ilungiswe ekhaya. Kungathathwa ngesifo sikashukela noma ukuvimbela - ngokukhuluphala, umkhuba wokuthola isifo sikashukela. Ukulungiselela umuthi, udinga ukuthenga i-100 g yomfula we-beaver ku-powder bese uwuthululela ngotshwala noma nge-vodka (0.5 l). Faka umuthi embizeni yengilazi okungenani izinsuku ezintathu, kodwa umphumela wokwelapha okhulunywayo, ikakhulukazi lapho usebenzisa i-vodka, ubonwa emathanjeni obudala benyanga. Nsuku zonke, ukumnika kumele kunyakaziswe. Ukugxiliswa okuqediwe kufanele kufakwe i-vodka, kugxilwe kumbala wokufakwa: kufanele kube nsundu ngokukhanyayo, njenge-cognac.
Bathengisa umzimba wonke kwi-Intanethi ngefomu elomile, kepha kungcono ukuthenga izinto ezingavuthiwe kubazingeli abanedumela eliqinisekisiwe futhi baligcine efrijini ezikhwameni eziningana zepulasitiki. Ngokulondolozwa okufanele, indawo yokusebenza igcina izakhiwo zayo iminyaka emithathu. Isifutho esimnyama esimisiwe asinazo izinto zokuphulukisa.
Ukuthola i-tincture, ingasikwa ibe yizicucu futhi ithulule i-100 g yezinto ezingavuthiwe ebhodleleni le-vodka noma utshwala. Ukulungiselela i-powder, ungayigaya ku-grater noma kwi-grinder yekhofi.
Kuliqiniso, izinto ezingavuthiwe zinephunga elimnandi, ngakho-ke kungcono ukwenza umuthi ngaphandle ezitsheni eziklanyelwe ngokukhethekile nezinye izinto zasekhishini, ngoba akulula ukugeza ummese noma i-grater kusuka musk.
Thatha ukufakwa kokusakazwa komsinga we-beaver ngesilinganiso sokwehla elilodwa nge-5 kg ​​yesisindo. Ngokwesilinganiso, kutholakala amaconsi angama-20- 40 (isigamu sesipuni noma esigcwele) ngasikhathi. Ungaphuza ngendlela efakwe isigamu sehora ngaphambi kokudla noma unciphise ukunambitha ngamanzi, uthele itiye.
Ukuvimbela, kwanele ukuthatha isipuni esisodwa somuthi nsuku zonke, ngaphambi kokudla kwasekuseni. Unganciphisa ukuqoqwa kokukhishwa. Emahoreni ekuseni (kusuka ku-9 kuye ku-11), umsebenzi wamanyikwe uphezulu, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ungawudlulisi umuthi ubheke kwesinye isikhathi.
Thatha i-castoreum nge-apple cider uviniga namanzi ngezingxenye ezilinganayo, futhi, ekuseni. Phuza isipuni esisodwa ngasinye. Inkambo yokwelashwa yinyanga eyodwa. Ngemuva kwalokho udinga ukuthatha ikhefu izinyanga ezintathu bese uphinda uma kunesidingo.
Ekwelapheni imithambo ye-varicose, abanesifo sikashukela basebenzisa i-tincture parallel: ukusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle. Ngokunyakaza okulula komzimba, thambisa uketshezi endaweni yenkinga. Umphumela (ukwehla kokungezwani kwe-vein, ukunyamalala kwe-edema) ubonwa ngemuva kwamasonto angama-2-4.
Kwama-sprains, amabhuthi, ungasebenzisa i-compress nge-beaver river draosal. Kulokhu, i-tincture ihlanjululwe ngamanzi ngesilinganiso esingu-1: 1 futhi ifakwe ngembatho yokugqoka ye-gauze noma ezinye izicubu. Kuboshwe ibhandeji emabhulokini futhi imbozwe ngopulasitiki. Bamba i-compress amahora amaningi, ungayishiya ubusuku bonke.
Faka ithonsi lokufakwa kokufaka kuma-rectal suppositories: ncibilikisa ikhandlela kubhavu wamanzi, ngemuva kokungeza i-castoreum, uthele kubumba futhi upholile.
Kwaphawulwa ukuthi i-hood isebenza ngokushesha kune-powder, nayo ethathwa ngenani le-1 g ngethamo ngalinye. Noma unesifo esinjengesifo sikashukela, umphumela osheshayo awudingekile.
Ukwelashwa kwanoma yisiphi isifo esingamahlalakhona ngamakhambi we-homeopathic kuthatha izinyanga ezingama-3-4, futhi ukusakazwa kwe-beaver akuhlukile. Kodwa imiphumela yokuqala yokwelashwa ibonwa kakade ngeviki lesithathu noma lesine lokusebenzisa njalo i-castoreum.
Ukusakazwa kwe-beaver ku-mellitus yesifo sikashukela kusetshenziselwa njenge-ejenti ye-hypoglycemic esiza i-pancreas, futhi kusiza ukwehlisa isisindo futhi kuenze umzimba ube nokujwayelekile.
Iqiniso elingokomlando eliqinisekisa ukusebenza kwangempela komshudo we-beaver kushukela likwazi ngemiphumela yokwelashwa kwe “sifo sikashukela” seMao Zedong enkulu.
Abaphilisi baseChinese ekwelashweni kwesifo sikashukela bancoma ukuthatha umfudlana we-beaver uhlanganiswe ne-bile bile. Izici ze-bear bile:
Ukusheshisa ukwehlukana kwamafutha,
Ikhipha amathumbu ubuthi
Kuqeda izimpawu zesifo sikashukela
Yehlisa ukunakekelwa kwe-cholesterol "embi".
Ukwelashwa okuhlanganisiwe nezidakamizwa ezimbili kufanelekile kwabanesifo sikashukela ngohlobo lwesibili lwesifo. Kuyadingeka ukulandela irejimeni ethile yokwelashwa:
Ngosuku lokuqala, kuthathwa kuphela umfudlana o-beaver,
Kowesibili - kuphela i-bile bile,
Nge-3 ne-4 - kuphinde kube ukusakazwa kobuhlalu kuphela,
Ngosuku lwe-5 nolwe-6 futhi, kudliwe i-bile bile kuphela,
Izinsuku ze-7, 8 nele-9 zenzelwe ukwelashwa ngomfudlana we-beaver.
Kamuva, inkambo iyaqhubeka ngokulandelana okuphindayo. Izidakamizwa ezikwinkimbinkimbi zithuthukisa ukusebenza kwazo komunye nomunye, zandisa ukuzwela kwamangqamuzana kuyi-insulin yazo kanye nokusebenza kanyakanye.
Akukho datha ocwaningweni olunzulu lwamakhono wokukhishwa kanye nemiphumela yomphumela wawo kubantu. Kukholelwa ukuthi umuthi wemvelo we-homeopathic akufanele unikeze imiphumela emibi futhi umunca umzimba yi-100%.
Namuhla, imikhankaso eminingi yamakhemikhali ikhiqiza hhayi kuphela ama-tincture we-beaver, kepha futhi nezithasiselo zokudla ezisebenzayo ngokusekelwe kulokho okuluhlaza okotshani. Kulokhu, imiyalo ingakhombisa nokuphikisana:
Ukuzwela komuntu ngamunye kwezithako ezisebenzayo zefomula,
I-BAA Kastorkin - izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala futhi zikhulelwe,
Ukugxiliswa kotshwala - ukungabekezeleli izingxenye eziyisisekelo zomuthi, izingane nabesifazane abakhulelwe, izinkinga zezitho zokuzala kanye nezindlala ze-adrenal, izifo ezithathelwana ngocansi.
Imiphumela emibi - ikhanda, ukuwohloka kwemizwa, ukuqwasha - ukukhula kusuka kumithi eyeqisayo.
Ezigcawini ezithokomele nakwezokuphawula kuvidiyo kunokubuyekezwa okuningi kwabamele "lesi sifo esimnandi" ngesipiliyoni sabo ekwelapheni i-tincture.
Abantu abaningi banaka ikhwalithi yomuthi onikezwa kunethiwekhi yamakhemikhali, ngakho-ke bakhetha ukuzikhipha ngokwabo noma i-powder uqobo. Umbono ojwayelekile wemiphumela muhle:
I-tincture inciphisa ukusebenza kwemitha,
Ithuluzi linciphisa ukubonakaliswa kwezimpawu eziphambili zesifo sikashukela - ukoma, ukozela, ukulahlekelwa amandla, isifiso sokungalawulwa, izinkinga zesikhumba,
Umuthi usiza ukuguqula i-lipid metabolism futhi ususe i-LDL eyeqile,
Thayipha isifo sikashukela esi-2 sikhuthele emzimbeni ngokweqile ngokukhishwa.
Abanye banciphisa izimpawu ze-hangover ene-multicomponent, abanye basusa izimpawu zobuthakathaka bocansi, kepha umphumela omkhulu ukuqinisa ukungatheleleki kanye nokubuyiselwa kokuzikhandla kokuqina komzimba.
Kumele kuqashelwe ukuthi umphumela wokwelashwa uvela ngemuva kwamaviki ama-3-5. Lapho beqeda inkambo ephelele, abaningi baphawula ukwehla kokuxhomekeka kumathebulethi anciphisa ushukela. Ngasikhathi sinye, ukumuncwa okugcwele kweglucose kunikeza umzimba amandla, futhi iziguli ziqaphela ukuqina kwamandla nomoya.
Alikho iphilisi eliyisimangaliso lesifo sempilo yonke esifana nesifo sikashukela, futhi umfudlana we-beaver nawo akuyona i-panacea. Umphumela we-hypoglycemic wesidakamizwa kungenzeka ngaphansi kwazo zonke izimo zokulawulwa kwesifo sikashukela: ukudla okune-carb ephansi, ukusebenza komzimba okungenzeka, ukuhlolwa okujwayelekile kwezokwelapha nokuqapha okuzimele kwemingcele ebalulekile.
I-Jet beaver (i-castoreum) inesakhiwo esiyingqayizivele.
Izinto zokufakelwa noma zemvelo azinayo isethi enjalo yezakhi.
Kuzo zonke izidalwa zenyama, izinto ziyakhishwa umchamo, futhi ku-beaver, lezi zinto zihlala zinqwabelana emzimbeni.
Lezi zilwane, ngenxa yezinto ezikhethekile, ziheha abantu bobulili obuhlukile, futhi futhi zisebenzise ngesikhathi sokudla, ukugula kanye nokwelashwa kwamanxeba. Futhi kubantu, kuyasiza ezinhlobonhlobo zezinto ezisebenzayo nezakhi zomkhondo. Isetshenziselwa izifo ezahlukahlukene, lokhu kuyasebenza nasoshukela.
Abantu bacabanga ukuthi uma kungumfudlana, kusho ukuthi kusho ukuthi umchamo. Lokhu akunjalo. Ukusakazwa kwe-beaver yinsimbi esekheni yangaphakathi, isitho esibunjiweyo, esinesisindo esingu-250-300 g, sinomumo obunjwe ngunda futhi sihlukaniswe yi-septum. Inokuvumelana okungaguquki (njengesihlabathi esimanzi) nephunga elithile. Owesilisa unamabhana ama-3 wezindlala, insikazi - 2.
izingxenye eziphambili ze-p-ethiphenol, borneol,
i-benzoic ne-salicylic acid,
uwoyela obalulekile nosawoti,
i-potassium, i-calcium, i-sodium,
ithusi, i-zinc, i-aluminium, i-manganese, insimbi,
titanium, nickel, abicah.
Ukusakaza kwe-beaver kunezindawo ezilandelayo:
ikhulula ukuvuvukala ebusweni nasemilenzeni,
kuthuthukisa amandla odonga lomthambo,
kusebenze ukukhubazeka ngokomzimba nangokwengqondo,
kwandisa ukumelana komzimba ezifweni ezibangelwa amagciwane kanye namagciwane.
Ngohlobo 1 sikashukela, kuyasiza ukuthuthukisa ukwakheka kwama-carbohydrate futhi kugweme ukuguquguquka okubukhali kushukela wegazi. Kuhlobo 2 sikashukela i-mellitus, ukusakazwa kwe-beaver kunomthelela oqondile we-hypoglycemic, kuze kuthi iziguli zenqabe izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Futhi qeda ngokuphelele ushukela.
Ngaphezu kwalokho, umfudlana we-beaver uqinisa izivikelo zomzimba. Isiza ukunxephezela ukusweleka kwama-macro- kanye nama-micronutrients, i-normalization metabolism futhi imisa izinqubo zokuvuvukala. Ukusakazwa kwe-beaver kunciphisa ukuvela kwegazi, lokhu kunciphisa ubungozi be-thrombosis futhi kuthuthukise ukuhamba kwegazi kushukela.
Ukusakazwa kwe-beaver kusetshenziswa ngezindlela eziningi:
i-tincture noma utshwala,
ama-rectal kanye nama-suppositories angasese.
Isetshenziselwa ukusetshenziswa komlomo, uma ngabe i-tincture yotshwala. Ngaphandle - ngesimo sokugcotshiswa kwamafutha kanye nama-lotions. Ngesifo sikashukela, sisetshenziswa ngaphakathi njenge-tincture yotshwala. Kusetshenziselwa ukusakazwa kwe-beaver ngezinjongo zokwelapha neze-prophylactic.Uma ubuza udokotela ngeseluleko lapho ukhetha umthamo, lokhu kuzolunga kuphela.
Ukuze uqinise umzimba futhi uvikele izifo, thatha amathonsi angama-20-30 ngesikhathi esisodwa ngosuku. Ukuze uthole ukwelashwa, ngokuya ngobukhulu, 40-100 yehla izikhathi ezingama-2-3 ngosuku. Ukusakazwa kwe-beaver kunuka ngokungathandeki futhi kungadala amanyala. Ezikhathini zasendulo, lalidliwa uju. Manje batusa ukuyiphuza nekhofi: ukuthayipha ikofi emlonyeni wakho, engeza umthamo ofanele we-castoreum kuyo futhi uthathe isiphuzo esikhulu esingu-1, ukunambitheka kufana nekhofi ne-cognac.
Uma umuntu engakwazi ukuyisebenzisa ngale ndlela, ingathathwa ifomu le-capsule, futhi ungazenzela wena amaphilisi noma uzithenge esezenziwe ngomumo. Umphumela wokuqala wokuphucula uvela ngemuva kwamasonto angama-3-4, mhlawumbe ngaphambili.
I-tincture yotshwala ilungiswa kanjena:
nquma i-iron kahle (inhlanganisela enhle, izokufaka okungcono),
uthele i-vodka noma i-70% yotshwala ngesilinganiso sama-50 amagremu we-beaver kusisombululo se-450 ml sotshwala,
vumela ukufaka izinsuku ezingama-3-5 endaweni emnyama endaweni yokushisa yama-+10 - +20 degrees,
uthele i-300-600 ml futhi nge-vodka noma utshwala,
umbala akufanele ube nsundu, kepha ufane ne-cognac,
kuxutshwe uviniga we-apple cider namanzi ngokulinganayo,
thatha isipuni esisodwa ekuseni imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla,
Faka isicelo kungakapheli inyanga eyi-1
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, izifundo zingaphindwa.
Kuneziguli ezingabhemi utshwala, noma ezingafuni ukuthatha umfudlana we-beaver ngale ndlela. Lapho-ke i-gland eyomile yomile idinga ukuba inhlabathi ibe yi-powder, ifakwe isinkwa (ingabi ngaphezu kwekhanda lomdlalo) futhi isetshenziswe kuleli fomu.
Imiphumela emibi ihlala yenzeka ngenxa yedosi elikhethwe ngendlela engaqondile, i.e. ngenxa yokweqisa. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala isifundo, udinga ukuxhumana nochwepheshe. Ukukhethwa komthamo womfudlana we-beaver, njenganoma yisiphi isidakamizwa, kwenziwa ngakunye. Kuya ngesimo sezitho zangaphakathi, ukusebenza kwezifo zokuphefumula, zenhliziyo, izinhlelo zezitho zangasese nezinzwa, ubudala, ubulili nesisindo somzimba.
Uma isiguli siqala ukusebenzisa umfudlana we-beaver ngokwaso, ngakho-ke kuyadingeka ukubheka izinguquko emzimbeni, ikakhulukazi ezinsukwini zokuqala zokusetshenziswa. Hlola isimo somzimba esivamile bese ulinganisa ushukela wegazi. Uma kwenzeka kunezimpawu ezisolisayo, bonana nodokotela.
Imiphumela emibi uma kwenzeka ngokweqile:
Njengoba lokhu kungumkhiqizo wemvelo wemvelo, zonke izinto eziphilayo zitholakala kahle, azikho iziphikiso eziphelele. Kungahle kube nemiphumela yokungezwani komzimba nokungahambelani nezinto ezisebenzayo zomsinga we-beaver. Ukuqapha kufanele kusetshenziswe kwabesifazane abakhulelwe nezingane ezingaphansi kweminyaka eyi-14.
Wonke umuntu kufanele azi ukuthi umphumela wokwelapha awenzeki ngokushesha. Izimpawu zokuqala zokuthuthuka zivela emavikini okuqala ayi-3-4.
Ukusakazwa kwe-beaver ukuphela kwento yemvelo enezinto ezithile ezikhethekile ekwakhekeni kwayo. Zithinta kahle zonke izitho nezinhlelo zomzimba, ngaphandle kokubanga imiphumela emibi.
Usebenzisa ukusakaza kwe-beaver kushukela, imiphumela elandelayo ingatholakala:
i-normalization ye-glucose yegazi
ukunyamalala kwezimpawu zesifo sikashukela,
ukwehla kwe-cholesterol yegazi,
ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuthatha umfudlana we-beaver kushukela kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqondisa udokotela, ungangeqi umthamo obekiwe.
Imvelo inika abantu umuthi ophilisayo, omunye wawo yi-beaver musk. Ukusetshenziswa komsinga we-beaver kushukela inezibuyekezo ezinhle ekwelashweni.Le ngxenye yemvelo ikhiqizwa yi-gland yokulungiselela yesentambo se-waterfowl futhi isebenza njengebhethri lezakhi. Isisindo esinsundu esinephunga elithile sibizwa nangokuthi i-castoreum. Lokhu kungumuthi wezinto eziphilayo kunomuthi ongakhulisa ukungatheleleki izikhathi eziningana.
Abaningi, ngemuva kokufunda igama, bacabanga ukuthi lo ngumchamo. Cha, lokhu akuyona indle yokugunda. ICastoreum iwukufundisa okungokwemvelo, ngakho-ke ama-beavers adlulisela imininingwane komunye nomunye, isinqandamatheki sezinto eziphilayo ezisebenzayo ezidingekayo ukuze ama-rod akwazi ukusinda ebusika. Ebusika, zidla kuphela kumagxolo agcwele amanzi. Uma uthatha i-beaver futhi uqhathanisa indlala yayo yasekwindla neyodwa yasentwasahlobo, khona-ke kwimeko yokuqala igcwele ngokuphelele, futhi ngentwasahlobo ingenalutho. Lesi yisistimu evikela umzimba futhi evuselelayo yomzimba wamagundane. Lapho esetholile, ukulimaza umzimba we-beaver kusebenza njengezithambisi zokwelapha.
Inani elikhulu le-salicylic acid, elisebenza nje izimanga.
Izinto zokulandela: ithusi ne-manganese, i-iron ne-zinc, i-aluminium.
Ama-macronutrients: i-sodium ne-calcium, potassium ne-magnesium, phosphorus.
Amakhemikhali axube i-castorine ne-beaver gum. Lezi zingxenye azinyibiliki emanzini, kepha utshwala buvumela ukuxhumana kwabo okugcwele noketshezi. Ngakho-ke, ama-tinctures otshwala athandwa.
Izakhi eziyinkimbinkimbi zemvelo zamaprotheni enza ukusabela kwezinto eziphilayo.
Izinto ezingaphezu kwama-50, kufaka phakathi i-borneol, i-acetophenone, i-benzyl alcohol, umusk.
Ukudla kwe-beaver kubandakanya izinhlobo ezingaphezu kuka-150 zezitshalo zokwelapha. E-Russia, i-castoreum kudala isetshenziswa ekwelapheni izifo. Ukukhulunywa okokuqala kwezindawo zokuphilisa kuqale esikhathini seNkosana u-Alexander Nevsky. I-Beaver musk ingusizo olukhulu komunye umuthi. Lo mkhiqizo ungathengwa ekhemisi ngendlela ye-tincture yotshwala noma i-powder. Kuyadingeka ukusebenzisa ngesilinganiso: 1 i-1 kg ngesisindo somuntu.
I-tincture yokuphulukisa ingalungiswa ngokuzimela. Nge-100 g kafulawa engeza u-0.5 l we-vodka noma i-70% yotshwala. Bayeke batheleke amasonto angama-3-4 endaweni emnyama.
Okokuqala udinga ukufaka i-tincture ngamanzi ngesilinganiso esingu-1: 1. Udinga ukuphuza ekuseni ngaphambi kokudla. Uma isisindo somuntu sidlula ama-80 kg, khona-ke ungaphuza i-1 tbsp. Isikhathi esihle kunazo zonke kubhekwa ukuthi sisuka ku-09.00 kuya ku-11:00. Inkambo yokwelashwa iyizinyanga eziyi-1-2 ngekhefu lezinsuku eziyi-14. Uma ungakwazi ukusebenzisa ama-tinctures otshwala, ungabeka esikhundleni se-powder ngesilinganiso se-1 g nge-5 kg ​​yesisindo somzimba womuntu.
Ngabe umuthi unikeza ini:
Imiphumela yokuvuselelwa kwesistimu enhle.
Ukusetshenziswa kwe-Ticical, kuzo zombili izigaba zokuqala zesifo, futhi ngezimo eziyinkimbinkimbi.
Umphumela omuhle kuma-carbohydrate metabolism.
Kuyadingeka ukuqala ukusebenzisa ngedonki elilodwa le-tincture, kancane kancane ukhulisa umthamo. Umuthi ohlukile utusa ukuphuza i-castoreum ngamanzi no-apple cider uviniga. Zonke izinto zixutshwe ngokulinganayo. Phuza i-1 tsp ekuseni ngaphambi kokudla. Ngezinjongo ze-prophylactic kabili ngosuku, ngezinhloso zokwelashwa - kathathu ngosuku, 1-1.5 tsp. Leli likhambi elihlukile, elenza amandla okuvuselela kabusha, elenza ukubuyabuyisa kanye ne-tonic.
Kumbuzo Ingabe ukusakaza kwe-beaver kuyasiza ngesifo sikashukela, singasho iqiniso elingumlando elifakazela inani elisebenzayo le-beaver musk. Umholi waseChinese Mao Zedong uthathe indiza ye-beaver ekwelapheni ukugula ushukela futhi waphila eneminyaka eyi-83, okukhombisa ukusebenza kahle kwalesi sidakamizwa.
Inani lomkhiqizo ukuthi, ngokungafani ne-ginseng, alikhulisi umfutho wegazi. Lapho umuntu eqala ukusebenzisa i-beaver musk, ususa izifo eziningana ngasikhathi sinye. Kuyasiza futhi nokusweleka kwamavithamini, ubuthakathaka obujwayelekile, ukusebenza ngokweqile, ukudangala.
Lesi sidakamizwa asinemikhawulo ethile, kuphela sandisa ukusebenza nobungqabavu, sithuthukisa futhi siphindaphinde ukubukeka. Umphumela omubi ukwanda kwe-potency kanye nemizwa, ngakho-ke akunconywa kubantu abanezifo zenhliziyo ezinzima.
Bliss Michael Ukutholwa Kwe-Insulin. 1982, 304 k.(UMichael Bliss Ukutholwa kwe-insulin, le ncwadi ayihunyushelwe kwisiRussia).
Kuhlelwe nguCamacho P., Gariba H., Sizmora G. Ubufakazi-based endocrinology, GEOTAR-Media - M., 2014. - 640 p.
T. Rumyantseva "Isifo Sikashukela: Inkhulumomphendvulwano ne-Endocrinologist", eSt. Petersburg, "Nevsky Prospect", 2003
Uyini umfudlana o-beaver
Isetshenziselwa ukusetshenziswa komlomo, uma ngabe i-tincture yotshwala. Ngaphandle - ngesimo sokugcotshiswa kwamafutha kanye nama-lotions. Ngesifo sikashukela, sisetshenziswa ngaphakathi njenge-tincture yotshwala. Kusetshenziselwa ukusakazwa kwe-beaver ngezinjongo zokwelapha neze-prophylactic. Uma ubuza udokotela ngeseluleko lapho ukhetha umthamo, lokhu kuzolunga kuphela.
Yini i-beaver musk
Abaningi, ngemuva kokufunda igama, bacabanga ukuthi lo ngumchamo. Cha, lokhu akuyona indle yokugunda.
ICastoreum iwukufundisa okungokwemvelo, ngakho-ke ama-beavers adlulisela imininingwane komunye nomunye, isinqandamatheki sezinto eziphilayo ezisebenzayo ezidingekayo ukuze ama-rod akwazi ukusinda ebusika. Ebusika, zidla kuphela kumagxolo agcwele amanzi.
Uma uthatha i-beaver futhi uqhathanisa indlala yayo yasekwindla neyodwa yasentwasahlobo, khona-ke kwimeko yokuqala igcwele ngokuphelele, futhi ngentwasahlobo ingenalutho. Lesi yisistimu evikela umzimba futhi evuselelayo yomzimba wamagundane.
Lapho esetholile, ukulimaza umzimba we-beaver kusebenza njengezithambisi zokwelapha.
Umfudlana we-beaver uyisitho esenziwe ngesikeya esenziwe ngumbala wesilwane lesi esinaso. Ngaphezulu imbozwe ngegobolondo eliminyene, futhi ngaphakathi igcwele into efana nesihlabathi esimanzi nephunga elithile.
Ngokubukeka, umfudlana we-beaver ufana nesihlabathi esimanzi futhi ekwakhiweni kwento yemvelo evela ezilwaneni. Le mfihlo ikhiqizwa ama-beavers futhi yenziwa emithanjeni egcina imfihlo, imvamisa ngosizo lwayo lwezilwane uphawu lwezindawo.
Ukukhishwa kwale mfihlo kwenzeka ikakhulukazi ngesikhathi sokuhlanganiswa kwama-beavers, ngoba kungale nkathi lapho kwakhiwa khona ezilwaneni ngobuningi.
Ukuze kukhishwe umfudlana we-beaver ngamanani amakhulu, kuyadingeka ukuthi utadishe uhla lokusatshalaliswa kwenqwaba yama-beavers futhi ufunde ubuchwepheshe obulungile bokuvuna izinto ezingavuthiwe, ngoba ezimweni lapho izilwane zifa ezimweni ezicindezelayo, ikhwalithi yemfihlo ekhiqizwe ilimala kakhulu.
Ikhwalithi enhle kakhulu yezinto ezitholwe ngokufa okusheshayo kwe-beaver. Ngemuva kwalokho, izindlala eziyimfihlo ziyakhishwa emzimbeni futhi zihlanzwe amafutha ngokushesha okukhulu.
Ukusakazwa kwe-beaver kunokuqukethwe okuphezulu kwama-antiseptics nama-antibalas, ngakho-ke, ngaphandle kokuqukethwe kokungcola kungagcinwa isikhathi eside.
Izinto ezikhishwe zingaphansi kokucutshungulwa (ukomiswa) bese zisetshenziselwa ukwenziwa kwemithi (i-tincture, i-powder). Ama-beavers adla kakhulu ngokudla kwezitshalo, futhi lokhu kuyimpendulo yombuzo: yini ukusetshenziswa komfudlana we-beaver futhi yiziphi izifo ezingalapha?
Izici zokuphulukisa zomfudlana we-beaver kushukela
Into engasetjenziselwa i-pathologies yemvelo ehlukahlukene. Kukweleta lokhu ngemisebenzi yokwelapha efana:
Ukuqiniswa kashukela wegazi
Ukwenza ngcono izinqubo ze-metabolic,
Ukugqugquzela ukulethwa kwegazi nokuncipha kwegazi,
Khulisa ithoni yemithambo nokuqina,
Ukuhlelwa ngokweqile kwengcindezi yegazi
Ukunciphisa ukuvuvukala kwemikhawulo,
Ukwenza ngcono uhlelo lwe-endocrine,
Ukuhlinzekwa kwesenzo se-antibacterial,
Ukuqinisa amandla okuvikela omzimba nokulwa namagciwane,
Ukugqugquzela umsebenzi wobuchopho.
Umfudlana we-beaver wesifo sikashukela ubongwa kakhulu ngekhono lawo lokulawula ushukela wegazi kanye ne-carbohydrate metabolism. Lokhu kwenza kube ukwelashwa okusebenzayo kwesifo sikashukela sohlobo 2. Ngohlobo lokuqala oluncike ku-insulin, i-castoreum imiselwe ukuqinisa amasosha omzimba.
Ngokusetshenziswa njalo kwemithi ngokususelwa ekusakazweni kwe-beaver, umuntu angalindela nemiphumela emihle efana nale:
Ukuthuthukiswa kwesimo okujwayelekile. Isimo sesiguli siyathuthuka futhi sizwa amandla amaningi,
Ukupholisa ngokushesha amanxeba, izilonda, amathumba, imichilo ye-herpes,
Ukuqiniswa kohlelo lwezinzwa. Lokhu kungenxa yokuqhutshwa okuthuthukile kokuphazamiseka kwezinzwa,
Ukunyuka kwe-hemoglobin egazini,
Ukwenza ngcono isimo sesikhumba.
Lapho kudliwa umfudlana o-beaver, imizwa yesiguli iyathuthuka futhi izizwa inamandla amaningi
Ukusetshenziswa kwe-castoreum ekwelashweni kwezokwelapha kunganciphisa isidingo sokusetshenziswa kwenani elikhulu lemithi. Inzuzo yayo engathandabuzekwayo iqiniso lokuthi ayinikele ekwandiseni umfutho wegazi wesiguli, futhi futhi ayinayo imiphumela emibi.
Ungapheka kanjani futhi uthathe umfula we-beaver wesifo sikashukela
Ukusetshenziswa kwendiza ye-beaver kungenzeka ngezindlela ezahlukahlukene. Imvamisa, isetshenziselwa ukwenza i-tincture yokuphulukisa yotshwala, kepha ungawusebenzisa umkhiqizo ngendlela yayo emsulwa. Kuthiwa i-tincture inomphumela osheshayo, kepha ngokuvamile, akufanelekile ukulindela imiphumela ezinsukwini ezimbalwa, ingathatha izinsuku ezimbalwa noma amasonto.
I-tincture yomfudlana we-boron yenziwa otshwaleni, ngakho-ke akufanele isetshenziselwe abantu abahlushwa uphuzo oludakayo, abesifazane abakhulelwe nabambethe izingane, izingane. It ilungiselelwe umane:
Amagremu ayi-100 we-castoreum oluyimpuphu athelwa ngehafu yelitha yotshwala bezokwelapha. I-vodka ejwayelekile ingahle ilungele le nhloso,
Ikhambi kufanele lifakwe endaweni emnyama, epholile izinsuku okungenani ezintathu. Kepha kungcono ukubekezelela amasonto angama-3-4,
Gcina i-tincture ngokukhethekile esitsheni sengilazi. Nyakazisa nsuku zonke
I-tincture Ready igxile kakhulu, ngakho-ke kufanele ihlanjululwe nge-vodka. Lokhu kwenziwa kuze kube yilapho kuthola umbala onsundu okhanyayo, ofana ne-cognac.
Le tincture ingathathwa njengesinyathelo sokuvimbela. Kulokhu, kwanele ukuphuza isipuni esisodwa njalo ekuseni imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Isikhathi sasekuseni asizange sikhethwe ngengozi, ngoba esikhathini kusuka emahoreni ayisishiyagalolunye kuya kwayi-11 ukusebenza okuphakeme kwamanyikwe kuyaphawulwa. Ngakho-ke, ukungagcinwa kokuphazanyiswa kwezikhathi kungathinta ukusebenza kwe-castoreum.
Ukusakazwa kwe-beaver kushukela kungasetjenziswa ngendlela yayo emsulwa. I-powder eqediwe ingathengwa ekhemisi noma uzenzele lapho kukhona i-castoreum eyomile. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa i-grinder ejwayelekile yekofi. Ngokungabikho kwayo, ngisho ne-grater enhle ifanelekile.
I-powder isetshenzisiwe, efana ne-tincture, imizuzu embalwa ngaphambi kokudla 1 isikhathi ngosuku. Ngaphezu kwalokho, umthamo wayo u-1 gram nge-5 kg ​​yesisindo somzimba wesiguli. Ithuluzi lingadliwa ngocezu lwesinkwa noma lugezwe ngamanzi.
I-Powder evela ekusakazweni kwe-beaver yesifo sikashukela isetshenziswa imizuzu eminingana ngaphambi kokudla 1 isikhathi ngosuku
Kufanele kukhunjulwe ukuthi lapho kusenziwa impuphu, umfudlana we-beaver ungakhipha iphunga eliqondile, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa izitsha zalo okungekhona ukuzwela.
Le ndlela ilula uma isiguli sinqunywe ukusetshenziswa kwamakhandlela. Kulokhu, ungakhulisa ngokushesha ukusebenza kwabo usebenzisa ukusakaza kwe-beaver. Ukuze wenze lokhu, qala ukhanyise ikhandlela. Lokhu kwenziwa kubhavu wamanzi. ICastoreum kwifomu le-powder ifakwa kwi-suppository encibilikisiwe, emva kwalokho ithululelwa kubumba bese iphola kuze kube yilapho ilungele ukusetshenziswa.
Ukusetshenziswa komsinga we-beaver ekwelapheni isifo sikashukela emithini yaseChina
Umuthi waseChinese udume ngezindlela zawo zokwelapha i-millennia. Ngokuqondene nomfudlana we-beaver ku-mellitus yesifo sikashukela, abelaphi baseMpumalanga batusa ukuwusebenzisa kanye ne-bear bile.
I-Bear bile ingomunye umkhiqizo owenziwe ngezinto ezinjengalezi:
Ishukumisa ukugqashuka kwamafutha,
Kuthuthukisa isimo somzimba jikelele,
Isusa ubuthi obunqwabelanayo,
Ukwelashwa okunjalo okuphelele okunomfudlana we-beaver ne-bile ye-bile kufaneleka kangcono kwabanesifo sikashukela sohlobo 2. Ngokusebenzisa imali njalo, ungalindela ukuqedwa kwezimpawu ezibuhlungu ezinsukwini ezimbalwa. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulandele irejimeni ethile yokwelashwa:
1 usuku - i-castoreum,
2 usuku - i-bile bile,
3 nezinsuku ezi-4 - i-castoreum,
Izinsuku ezi-5 nezingu-6 - i-bile bile,
7, 8 no-9 izinsuku - i-castoreum.
Kusukela ngosuku 10, i-oda elibuyayo lokuphuza izidakamizwa liqala. Imithamo eqondile ixoxwa kangcono nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Isici salokhu kwelashwa ukuthi ukusakazwa kwe-beaver kanye ne-bile kuqinisa isenzo somunye nomunye. Konke lokhu kuwuthinta kahle umsebenzi wamanyikwe, akhiqiza i-insulin.
Ukusakaza kwe-beaver kuvame ukuxutshwa namanzi noma i-apula cider uviniga ngesilinganiso esingu-1: 1. Kungenzeka futhi ukuyisebenzisa ngendlela yangaphandle. Endabeni yemithambo ye-dilated, amabhubu, amanxeba, ungenza i-compress esekwe kulokho okwemvelo. Ukuze wenze lokhu, i-tincture yotshwala evela kwi-castoreum ihlanjululwe ngamanzi ngezilinganiso ezilinganayo. Ucezu lwe-gauze noma ibhandeji ligxishwe ku-ketshezi oluphumayo futhi lusetshenziswe endaweni yenkinga. I-compress ihlanganiswa phezulu kwifilimu futhi ishiywe amahora amaningi, futhi okuhle kakhulu, ubusuku bonke.
Izinzuzo ne-Cons of Castoreum
Ngokuvamile, ukufingqa, kungaphikiswa ukuthi empeleni ukusakazwa kwe-beaver kuyithuluzi elihle okufanele lifakwe ekwelashweni kwezokwelapha. Akanawo amaphutha, futhi kunemiphumela emincane emincane kakhulu yokuthi umuthi ungasetshenziswa ngisho nezingane.
Iziguli ezinesifo sikashukela zisebenzisa umfudlana we-beaver, naka amaqiniso alandelayo:
Izinkomba zeGlucometer ziyathuthuka,
Izimpawu zobuhlungu zincishiswa kakhulu, okuwukuthi: ubuthakathaka, ukozela, ukoma okungapheli, ukoma nokuqhekeka esikhunjeni,
Ezimweni eziningi, umphumela omuhle uvela emavikini ama-4-5 ngemuva kokuqala komuthi. Ngalesi sikhathi, iziguli ziphawule ukwehla kokuxhomekeka kumathebulethi.
Kodwa kunenzuzo ukuqonda ukuthi ukusakazwa kwe-beaver, njenganoma iyiphi enye indlela yezokwelapha yendabuko, angeke kusetshenziswe njengokwelashwa okuyinhloko. Limelela kuphela eyodwa yezakhi zokwelapha eziyinkimbinkimbi. Futhi imiphumela emihle yangempela ingalindeleka kuphela uma yonke imithetho ibhekwa: umuthi okhethwe kahle, ukudla, ukuyeka imikhuba emibi, nokugcina impilo enempilo.
Ukusakazwa kwe-Beaver njengesitholi sezinto ezisebenzayo
Indlela enamandla eyingqayizivele yemvelaphi yezilwane ethathwe emithanjeni yamacici e-waterfowl ingasiza uhlelo lonke lomuntu. Ukusakazwa kwe-beaver kuzosiza futhi ekwelapheni isifo sikashukela kubantu abahlupheka ukuba babhekane nengxaki ye-endocrine, lapho amaseli aphendula ngokungahambisani ne-insulin.
Lesi sifo uqobo siwukungasebenzi kahle kwezitho zomzimba ezibhekene nokukhiqizwa kwe-insulin ye-hormone. Kubhekiselwa kwizifo zohlelo lwe-endocrine. Kwesinye isikhathi kuthatha isimo sokwephulwa kokuxhumana kokusebenzisana namaseli okuhlosiwe, kulokhu, izimbangela zesifo zisezingeni lamaselula futhi kunzima kakhulu ukuselapha. Ukwelashwa ngamakhambi esifo sikashukela i-mellitus yalesi simo akunakwenzeka.
Ukubonakaliswa kwalesi sifo ukoma nje, ukuphulukiswa kancane kwamanxeba, ukuzindla kanye ne-goosebumps emilenzeni. Kutholakala ngokunembile ukuhlolwa kwegazi. Ezigulini, amazinga kashukela wegazi akhuphuka ngezikhathi ezithile, le nqubo ingalandelelwa kusetshenziswa isivivinyo esisheshayo.
Izindlela zendabuko zokwelapha isifo sikashukela ngosizo lwezindlala zangaphakathi zezilwane bezaziwa isikhathi eside. Okukhombisa kakhulu iqiniso lokuthi iningi lezinto zokwelapha ezingalungiswa zimayini maphakathi neRussia naseSiberia, liphinde liqinisekise ukuceba kwesimo sendawo.
Imiphumela yokwephulwa okunjalo eyaziwa kwezokwelapha yimiphumela emibi:
ukuchama kaningi, njll.
Eqinisweni, yonke inqubo ye-metabolic ohlelweni iyaphazamiseka, futhi iyashabalala. Umuntu ukhathele futhi ezwa ukwehla kwamandla.
Ukusetshenziswa komsinga we-beaver ku-mellitus yesifo sikashukela kuzosiza umzimba ukuthi uthole amandla futhi kunciphise isidingo sokusetshenziswa kwemithi ngendlela efanele.
Ngaphezu kwalokho, into evela emzimbeni we -fowfowl izokwenzela ukulethwa kwezinto ezingekho okubalulekile, futhi lokhu, kuzobuyisa imetabolism ejwayelekile.
Isenzo samakhompiyutha asebenzayo sinomthelela ekujwayeleni ifomula yegazi. Isithangami sezinto ezisebenzayo sithinta izinqubo zamandla, futhi ukusakazwa kwe-beaver asisetshenziswanga kuphela konke ukuphazamiseka kwe-endocrine, kepha nokunye ukungasebenzi kahle kwezinhlelo nezitho zomzimba. Futhi ukuthuthukiswa kwezinqubo zamandla kuzonikeza ukuqina kwamandla nobungqabavu.
Ukuqinisekiswa kweBeaver Jet
Iqiniso lomlando lokuqinisekiswa kwangempela kwesenzo somuthi ukusetshenziswa kwalo yi-Mao Zedong enkulu yokuthola impilo kushukela. Othile ususe i-hangover ngaleli khompiyutha, othile ubuyisele izinkinga ocansini futhi wabuyela ekuvuseleleni kabusha, kanti umShayina omkhulu wasebenzisa izakhiwo zokwakheka okuxubile okuningi okuphathelene nokwelapha lesi sifo esikhulu nesingathandeki.
Usebenzisa umphumela oyinkimbinkimbi ekwelapheni noma yikuphi ukuphazamiseka kwe-endocrine ngejet ye-beaver nesifo sikashukela, kufaka phakathi, kungenzeka ukufeza imiphumela emihle ekubuyiselweni komsebenzi wohlelo lonke lomuntu.
Ukusetshenziswa kwaso kufanelekile, zombili uma kwenzeka kunokuntuleka kwe-insulin, izimo ezingamelana lapho izinga le-hormone lishintshashintshayo, futhi nezimo ezibucayi ezingapheli (ngokumelene nesizinda sokwelashwa okufakwa esikhundleni).
Ukusakazwa kwe-beaver kusifo sikashukela kunomthelela omuhle kwinqubo yama-carbohydrate emithini yendabuko.
Isiga esinsundu ngukuphakelwa kwezinto okuthi, ukungena ohlelweni lwesintu, kwandise ukungatheleleki kokuncipha ngenxa yeglucose engasebenzi kahle egazini. Ngenxa yalokhu, umfudlana we-beaver ovela kushukela udala izimo emzimbeni ukuze uthole amandla namandla.
Into yemvelo isetshenziselwa ukwelashwa okuyinhloko ekuqaleni kwezimpawu futhi njengomsizi omuhle kakhulu ezindleleni zendabuko zokuxazulula i-pathology enkambini eyinkimbinkimbi. Ukusakaza kwe-beaver kusuka kushukela kwehlisa ushukela wegazi. Umphumela ophumelelayo kuzoba ukusetshenziswa kohlobo lwesibili lwesifo, oluzokwazi ukudala izimo zokushoda kwama-hormone aphambili.
Ngaphezu kwalokho, i-beaver jet yesifo sikashukela yi-prophylactic evimbela izinkinga kwisifo esikhona futhi ezimweni lapho kunokuthambekela kokuqala kwesifo, noma kunezici zokucindezela ezingadala ukuqala kwalesi sifo. Futhi, izakhiwo zalo zisiza ukuguqula isisindo somzimba ngokwejwayelekile ngesisindo esinciphile futhi esikhulayo.
Lawula umuntu ngamunye ukuthi ungawuthatha kanjani umfudlana we-beaver kushukela, kuyadingeka ngokusekelwe ezicini zenkambo yesifo kanye nesisindo somuntu. Ukuqanjwa kuthathwa ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu.
Ukubalwa kwethulwe ngokuya ngezinkomba ezijwayelekile zomuntu omdala: ithonsi elilodwa le-tincture yotshwala kuwo wonke ama-5 kg ​​wesisindo somuntu.
Ijetti ye-beaver evela kwisifo sikashukela i-mellitus ayithathwa kuphela ngesimo se-tincture, kodwa futhi ngesimo sezinto zomhlaba iya esimweni se-powder, ngokufanayo i-1 g.
Kukholelwa ukuthi i-tincture ingena ohlelweni ngokushesha okukhulu, kepha umphumela kuleli cala awudingi isenzo esisheshayo sombani, ngakho-ke i-tincture noma i-powder kufanelekile.
Noma yisiphi isifo singavinjelwa kusetshenziswa umfudlana we-beaver nesifo sikashukela, esinye sazo. Ngale njongo, ukusetshenziswa kwenziwa ngenhloso yokuvimbela i-1 tsp. nsuku zonke ekuseni, imizuzu eyi-10-15 ngaphambi kokudla.
Kungani ukuvimbela kanye nokwelashwa nge-jet ye-beaver ku-mellitus yesifo sikashukela kwenziwa kuphela ekuseni?
Ngoba kule ndaba, indawo enenkinga ngamanyikwe futhi isikhathi esihle kakhulu sokuthatha ikhambi isikhathi sasekuseni: kusukela ngo-9:00 kuye ku-11:00.
Ukusetshenziswa komfudlana we-beaver ngokwephula imisebenzi ye-hormonal yomzimba
Ukusiza umzimba ukwazi ukubhekana nokungena kwezimpawu ngendlela yamagciwane, amagciwane kanye nanoma yiziphi ezinye izinto eziphilayo, ithuluzi lingumsizi emsebenzini womzimba wonke. Impela, ngalesi sifo esingajabulisi, amabutho okuvikela ahlala enza buthaka, futhi akukho ndawo angazithatha, ngoba umzimba usevele usesimweni sokuxineka ngenxa yokuntuleka kwamandla adingekayo.
Ngasikhathi sinye, ukuswelakala kwe-insulin kwephula umgomo wohlelo lomuntu ngenxa yomsebenzi ophazamisayo womzimba, awenzayo. Zonke izinqubo ze-metabolic eziholela ekushintsheni kwezicubu nezitho zomzimba zephulwa, nakuzo zonke. Ngakho-ke kusungulwa ingcindezi yomzimba emangalisayo.
Ukusiza ukuphuma kulezo zimo ezinzima, ukwakheka okunezakhi ezisebenzayo kuyasetshenziswa, okuwukuthi, ukwelashwa kwe-beaver stream yesifo sikashukela ngosizo lwayo kuzonikeza umphumela omuhle.
Ukusetshenziswa kwama-tinctures kanye nomphumela:
Isimo sohlelo lokugcina lubalulekile, ngoba kunokuxhumana phakathi kokuphulwa okukhulu nohlelo lwezinzwa, ikakhulukazi uhlobo lokucindezela.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuthinta kanjani umzimba.
Izinguquko zenzeka egazini. Ijetti ye-beaver kwisifo sikashukela ithinta ifomula yegazi, vele, hhayi ngaso leso sikhathi, kodwa ngemuva kwesikhashana. Ngenxa yalokhu, iba yi-viscous encane, ngemuva kwalokho izinqubo eziyizidlakudla ezicutshini ziqala kabusha.
Ungathenga ukusakazwa kwe-beaver kuwo wonke amadolobha aseRussia:
U-Alushta, Bakhchisaray, Belgorod, Veliky, Novgorod, Voronezh, Evpatoria, Kazan, Kaliningrad, Kerch, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Moscow, Oryol, Saki, St. Petersburg, Saratov, Sevastopol, Simferopol, Sochi, Sudak, Tambov, Tula , UTheodosius, uYalta.
I-Bear bile yesifo sikashukela
Phakathi kwezindlela zokwelapha i-mellitus yesifo sikashukela ngamakhambi esintu, i-bile bile esivele sishiwo yathola ukwesekwa okungalindelekile. Muva nje, ososayensi baseHarvard bathole ku-bile into esebenza ngempumelelo ekwelashweni kohlobo lokuqala. Kuze kube manje, akunakwenzeka ukuthi kuhlanganiswe into ngokwenziwe, kepha ungahlala uthenge umuthi odingekayo kubathengi.
Uma kungenzeka, kunconyelwa ukuthatha yinkimbinkimbi yemithi yemvelo esebenzayo. Ungahlanganisa izidakamizwa ezimbili ngasikhathi sinye: i-tincture ye-bear bile kanye nomfudlana we-beaver, noma i-musk deer kanye nomfudlana we-beaver. Ukuhlanganiswa kwazo zontathu izakhi ngeke kulimaze, into esemqoka ukuthi bazithathe ezilinganisweni ezifanele futhi ngokuya ngohlelo ngalunye olakhiwe nguchwepheshe onolwazi futhi onolwazi.
Kukhona futhi inqubo ethandwa kahle e-United States nasemhlabeni jikelele nguDkt Freydon Batmanghelidzh, okuthi phakathi kokunye, ifake phakathi ukulwa ne-syndrome ye-hyperglycemia engapheli. Umbhali wale ndlela uqiniseka ukuthi izinkinga eziningi zempilo (kufaka phakathi isifo sikashukela) zivela ekushoda kwamanzi emzimbeni womuntu
Ukuqeda le nkinga bese ululama ezifweni eziningi, kwanele imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla nangemva kwamahora ayi-1.5-2 ngemuva kokudla ngakunye, phuza izingilazi ezi-1-2 zamanzi ngosawoti omkhulu wasolwandle. Usawoti owanele usayizi wenhloko yomdlalo.
"I-elixir" efanayo "kunconywa ukuthi ithathwe ekuseni ngemuva kokuvuka futhi ngokushesha ngaphambi kokulala." Sekukonke, umuntu udinga okungenani ama-30 ml wamanzi ngekhilogremu yesisindo somzimba ngosuku.
Futhi ehlobo ngisho nangaphezulu.
Uma ungahlushwa ushukela ophezulu, lokhu akusho ukuthi uvikelekile ngokuphelele ekuthuthukisweni kwalesi sifo. Ukuvimbela isifo sikashukela ngamakhambi esintu kuyindlela elula nephephile yokuhlangabezana nokusondela kwalesi sifo sihlome ngokuphelele noma kusivimbela.
Ngasikhathi sinye, umuthi wendabuko awunawo umthelela olimazayo kwezinye izinhlelo zomzimba uma uqhathanisa nezidakamizwa zamakhemikhali kanye nemijovo.
Ungathenga amakhambi abantu ekwelashweni nasekuvimbeleni isifo sikashukela esitolo sethu online. I-Castoreum, i-musk deer musk, izimpande ze-ginseng, i-bear bile nezinye izithako eziningi sezivele zilungiselelwe wena. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uvakashela ikhathalogi yethu futhi unakekele impilo yakho namuhla.
I-tincture isetshenziswa ngaphakathi futhi isetshenziswa ngaphandle. Umthamo obaliwe ufakwa emanzini futhi uphuzwe esiswini esingenalutho isigamu sehora ngaphambi kokudla kathathu ngosuku, inkambo yezinyanga ezingama-2-3.
Uma ungathandi iphunga nokunambitha, ungaphuza isiphu sekofi, ujusi noma itiye. I-powder eyomile ithathwa kanye ngosuku ekuseni ngaphambi kokudla, futhi umthamo wayo usayizi wenhloko yomdlalo.
I-powder ifakwa engxenyeni yesinkwa noma igezwe ngekhofi. Noma unesifo sikashukela, ungaxuba ezingxenyeni ezilinganayo zotshwala i-tincture, uviniga we-apple cider namanzi ahlanzekile.
Thatha isipuni esisodwa sale ngxube ekuseni enyangeni eyi-1.
(izindleko zezimpahla ehhovisi laseMoscow zingahluka kancane kulokho kukhonjisiwe kusayithi)
Shayela izinombolo ezi-2 zokugcina kusuka ku-2 a.m. kuya ku-17 eMoscow isikhathi
I-692527 Primorsky Territory,
ICastoreum iyinto ebaluleke kakhulu futhi iyikhambi lemvelo lalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, ukuthi ungawuthatha kanjani umfudlana we-beaver ubusaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Okhokho bethu basebenzise nezindlela zokuphulukisa zemaskhi ukukhipha izifo.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi umfudlana we-beaver uketshezi, ngenxa yegama lawo elithile. Eqinisweni, lokho okubizwa ngokuthi yisitho sokubhanqwa esenziwe nge-beaver.
Imbozwe ngegobolondo, ngaphandle inesimo esenziwe ngoparele, ngaphansi kwegobolondo kukhona okuqukethwe okufana kakhulu nesihlabathi esimanzi.Ukusakaza kwe-beaver kunephunga elibukhali, eliqondile, kepha lisiza kakhulu: liqukethe inani elikhulu lamaminerali, amavithamini nezinto zokulandela umkhondo.
Ingasetshenziselwa ukwelapha noma yisiphi isifo - futhi isifo sikashukela asifani.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela esinomfula we-beaver kuyimeko yangempela evela kumkhuba wethu. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokwelashwa ngamakhambi esintu, iziguli zethu eziningi ziyayeka ukuphuza amaphilisi. Kuyaqapheleka ukuthi izinhlobo ezilandelayo zibolekisa ekwelashweni:
Sizibandakanye ekukhishweni komuthi, kanye nokulungiswa kwawo, mathupha. Okwenziwe izikhala, kusetshenziswa kuphela izikhwama ezinkulu, kanti iresiphi yakudala nokulingana kuyahlonitshwa. Zonke izinsuku sithuthukisa ulwazi lwethu. Ngisho nodokotela - abantu abangabazi kakhulu ohlangothini lwemithi yendabuko - qaphela ukusebenza okuphezulu bese beza kithi ukuzothenga ama-tinctures ekwelashweni nasekuvimbeleni.
Ngubani okungafanele usetshenziswe?
Njengomthetho, isifo sikashukela sinezimpawu ezihlukile ezingakhombisa isifo:
Isiguli sihlushwa njalo ukoma, ukuphuza amanzi akulethi ukukhululeka.
Ubuthakathaka. Amandla ashiya umuntu, noma ngabe engekho umdlandla womzimba.
Umuzwa wendlala ngemuva kokudla kwakamuva.
Izinkinga zesisindo. Isiguli 'singoma phambi kwamehlo akhe,' noma sibe nokukhuluphala.
Ukuchama okusheshayo, njll.
Umuntu unokwehluleka ezinqubweni ze-metabolic. Ukwemukelwa komsinga we-beaver kuzosiza umzimba uthole amandla futhi kwehlise nesidingo semithi. Ngaphezu kwalokho, i-castoreum izosiza ekubuyiseleni izinto ezibalulekile emzimbeni futhi ibuye yenze umzimba ube nokujwayelekile.
Ngefomu le-2 yesifo sikashukela, i-beaver jet isebenza kahle kakhulu, inganciphisa amazinga kashukela ngisho ngaphandle kokusebenzisa umuthi. Ngohlobo 1, kubekwa njengokungeziwe ukuze kuqiniswe ukungavikeleki komzimba.
Imvamisa, indiza ye-beaver isetshenziswa njenge-tincture yotshwala.
Ukusakazwa kwe-beaver kungasetshenziswa kokubili ekwelashweni nasekuvimbeleni. Kusetshenziswa ama-tincture amaningi enziwa otshwaleni, kodwa futhi nalawo maqhubu e-powder awenziwa i-powder nawo ayasetshenziswa. Inani elidingekayo libalwa ngokuya ngesisindo sesiguli kanye nenkambo yesifo. Kubalwa ngesilinganiso sokudonsa kwe-1: 5 1 kwe-tincture noma i-1 gr. 5 kg powder. isisindo. Njengomthetho, ukwelashwa kuthatha izinyanga eziyi-1-3.
Njenge-prophylaxis, kusetshenziswa i-1 tsp. ukhukhamba ngaphambi kokudla ekuseni.
I-Beaver castoreum ihlukaniswa ngezakhiwo zayo ezizuzisayo ngenxa yokudla nokudla kwalezi zilwane, okubandakanya ngaphezu kwama-subspecies angaphezu kuka-150 wezimila zokwelapha. I-tincture egeleza utshwala egeleza noma umkhiqizo ungatholwa ekhemisi futhi udliwe ekubalweni: Amaconsi ama-2 nge-10 kg yesisindo sesiguli.
Ukuzilungiselela kwe-tincture, engxenyeni eyinhloko yayo kungumfula we-beaver, kushukela, ukusetshenziswa kwemali
Thatha amagremu angama-200 wesisindo oluyimpuphu,
Faka ilitha le-vodka noma lotshwala (70%),
Sibeke endaweni emnyama inyanga,
Faka usinki ngamanzi ngaphambi kokusebenzisa 1: 1,
Phuza ukumnika ngaphambi kokudla kusuka ngo-9 kuye ku-11 ekuseni,
Iziguli ezinesisindo esingaphezu kwama-80 kg zivunyelwe ukuphuza amagremu ayi-15,
Phuza inkambo yezinyanga eziyi-1-2 ngekhefu lezinsuku eziyi-10-14,
Uma ukungabaza kuhlala kungabikhona: noma ngabe umfudlana we-beaver uyasiza ngesifo sikashukela, ubeke eceleni. Vele, kuyasiza nje!
I-HYPERTENSION NOMA i-HYPOTONYMY: ukwenza umfutho ube munye, umuthi uthathwa ngenhla yamaconsi ama-5 - 6 nsuku zonke, esikhathini esiyinyanga eyodwa,
IZIVIVINYO NERVOUS NE-CARDIOVASCULAR (i-migraine, ukukhubazeka komzimba): ukuvuma inkambo kuyinyanga eyi-1. Ngasikhathi sinye, ngosuku lokuqala, thatha i-1 uphonsa we-tincture we-musk, nsuku zonke ukwandisa inani lamaconsi ngeyodwa. Ngemuva kwezinsuku eziyi-15, inani lamaconsi liyancishiswa elilodwa. Ngakho-ke, ngosuku lwe-30, kudonswa ithonsi elilodwa,
I-COLD, PULMONARY DISEASES (i-ARVI, i-sinusitis, umkhuhlane): kwanele ukuthatha uhlobo lokuphefumula - vula isitsha esine-tincture bese uthatha umoya omncane obukhali ngekhala lakho nangomlomo,
Amanxeba wokuhlunga: ahlanzwa nge-musk ehlanjululwe ngamanzi (hhayi i-tincture yotshwala). Ama-rins nsuku zonke anezikhathi ezingama-5-6 ngosuku, kuze kube yilapho isilonda seluhlanzwa ngokuphelele futhi selulashwa,
IZIFO ZESIFO SE-GYNECOLOGICAL (endometriosis, cyst, ukuvuvukala kwezindlala): thatha isipuni esisodwa kathathu ngosuku izinsuku ezingama-30. Ngemuva kwalokho umthamo wehliselwa ku-5-6 amaconsi ngosuku. Ukwelashwa kuthatha izinyanga ezi-2 kuye kwezingu-3,
I-ONCOLOGY, CANCER: ukunciphisa izimpawu ngemuva kwe-chemotherapy kanye nokuvimbela ukukhula kwamaseli womdlavuza, ukusakazwa kwe-beaver kufanele kuthathwe ngokuqinile ngokohlelo losuku. Ku-100 ml wamanzi, ukumnika kuhlanjululwe ukuphatha ihora. Amahora ayisithupha - amaconsi amathathu, amahora ayisishiyagalombili - amaconsi ayisikhombisa, amahora ayishumi - amaconsi ayisishiyagalolunye, bese kuthi njalo emva kwamahora amabili (ukwamukelwa kokugcina 21-00) kwehle ama-15,
I-HEMATOMATAS, BLUDS, Ears, NOKING VARICOSIS YEMIPHUMELA YAMANDLA: gcoba indawo ebuhlungu, bese uthambisa i-tincture ngokunyakaza okungama-massage ngaphandle kwengcindezi, thatha isipuni esengeziwe amahlandla ama-3 ngosuku ngehora ngaphambi kokudla, ngaphandle kokubamba noma ukuphuza,
IHEMORIOUS, QAPHELA: kanye nokusetshenziswa kwangaphakathi kwe-tincture enanini lethisipuni elilodwa ngosuku, amakhandlela wangaphambi okwenziwe ngengqimba yokufakwa kwe-beaver afakwa ebusuku, isifundo sithatha okungenani izinsuku eziyi-10,
ISETHESHA: chaza amathisipuni ama-2 we-tincture yotshwala engilazini yamanzi, cwilisa isixazululo se-tampon bese ufaka esithweni sangasese sowesifazane, uma kungekho ukuphazamiseka, ungakushiya ubusuku bonke, uhlelo olulodwa lwanele, lunamafomu asethuthukile - imithamo engu-5-6, kubandakanya nokuphuza isipuni ngosuku lwe-tincture ngaphakathi
UKUGCINWA KWAMFUTHA KWAMAHHALA: engeza isipuni se-tincture esetiyeni noma ekhofi, uphuze ufudumele, usebenzise ukuqwasha, umfutho wegazi ophakeme uphuze amajikijolo noma amakhambi okwelapha.
I-PROSSATE ADENOMAS: Kwi-adenoma ye-Prostate (eyokuqala), phuza isipuni esisodwa izikhathi 3-4 ngosuku ngesisu esingenalutho. Isengezo esengeziwe salesi sifo ngamafutha e-beaver. Faka isicelo ebusuku 1 endaweni yenkinga. Isikhathi sesifundo siyizinyanga eziyi-6.
I-EN empireETRIOSIS: Phuza umaskak isipuni esisodwa izikhathi ezi-3 ngosuku ngosuku esiswini esingenalutho. Ngemuva kokudla isikhathi esingangenyanga, umthamo ungancishiswa ube ama-5-6 amaconsi ngaphandle kwekhefu phakathi kwezifundo.
IZIVIVINYO ZESIFO SEZOBUCHWEPHESHE: Ekwelashweni kwezifo zemizwa, kusetshenziswa umfudlana we-beaver 1 times 2 ngosuku - usuku lokuqala, 2 kwehla kabili ngosuku - usuku lwesibili, amaconsi ayi-15 - izinsuku eziyishumi nanhlanu, izinsuku eziyi-14 - amaconsi ayi-14, izinsuku eziyi-17 - amaconsi ayi-30- Usuku loku-1 - lihle kabili ngosuku. Phinda ngenyanga yesibili.
UKUFANELEKA: Ukuze ungabi namandla, kunconyelwa ukuthatha i-beaver stream ekhipha isipuni 1 izikhathi 3 ngosuku. Kungcono ukuhlolwa kwamazinga e-testosterone ngaphambi kokutholwa kokuqala kwe-musk.
Lapho izinga lama-hormone lifinyelela okujwayelekile, thatha ikhefu izinyanga ezingama-2-3. Bese uthatha prophylactically ezinye izinyanga eziyi-12 kumaconsi angama-6,6 ngosuku ukuguqula uhlelo lwe-endocrine.
Amanxeba ama-purulent ahlanzwa nge-musk ehlanjululwe ngamanzi, kuya ngobukhulu, izikhathi ezi-5-6 ngosuku.
UKWAKHIWA KOKULELULA: Gcoba nge-musk (kuxutshwe namanzi ngesilinganiso esingu-1: 1) indawo yenkinga kaningana phakathi nehora. Ngemuva kwalokho faka ungqimba omncane wamafutha we-beaver.
Uma inxeba livulekile kakhulu, bese uligcoba nge-musk eceleni komphetho wesilonda nendawo ezungeze indawo yenkinga (nesilonda uqobo singalashwa ngesixazululo se-musk buhlanjululwe ngamanzi 1: 3). Amafutha e-Beaver angafakwa emanxebeni avulekile.
Inqubo yokuvuselelwa kwezicubu nokwelashwa kuzohamba ngokushesha. Ungathatha futhi imaskhi ngaphakathi ukuthuthukisa ukungatheleleki futhi ukululama ngokushesha.
Kanye ngesonto, ungagcoba indawo yenkinga ngezinyosi ezifile.
I-CHRONIC PROSTATITIS, EPILEPSY: (i-etiology engatheleleki) iphathwe ngokukhishwa kwe-beaver izinyanga izinyanga eziyi-12. Endabeni yokutheleleka ngegciwane noma okuxubile, i-musk ihlanganiswa nezinye izidakamizwa.
Ukwemukela komsinga we-beaver kuleli cala akukho ngaphezu kwe-5-6 kwehla izikhathi ezi-2 ngosuku. Kwi-prostatitis engapheli (i-etiology engatheleleki), uhlobo lomthamo lubalwa ngesilinganiso sebhodlela eli-1 (500 ml) ngenyanga.
Ngemuva kwenyanga, ikhefu lenyanga e-1.
I-PSORIASIS: I-Musk ingathathwa ngendlela yesisombululo ngokulahla umkhiqizo engilazini yamanzi. Udinga ukuphuza amaconsi angama-30- 35 nsuku zonke. Inkambo yokwelashwa izinsuku ezingama-40. Njengesilinganiso sokuvimbela nokulinganisa, amaconsi ayi-15-20 ngosuku anele. Nge-psoriasis, kuyadingeka ukugcoba izindawo ezonakele nge-suppository ebusuku bese ugoqa ngesikhindi.
I-RADICULITIS, OSTEHONDROSIS, UKUKHULULWA KWEMIVUZO KWE-VEINS. Ngaphambi kokuhlikihla, udinga ukufaka umusi kule ndawo yalesi sifo, bese ufaka umfudlana we-beaver futhi uwosonge ngesicubu.
I-NAIL MUSHROOM, SKIN: Ngaphambi kokuhlikihla, le ndawo yalesi sifo kufanele ihanjiswe, bese ufaka umfula we-beaver bese usonga ngendwangu. Ngaphakathi, thatha ama-30- 30 wehla imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla kabili ngosuku.
Inkambo yokwelashwa iyizinsuku ezingama-30. Izinsuku ezingama-30 zokuphumula nesigaba sokugcina sezinsuku ezingama-30.
I-CATARACTS, INFLAMMATION OF EARS, ISIQINISEKISO: Amaconsi ama-5 womfula we-beaver axutshaniswe namaconsi ayi-10 amanzi abilisiwe. Donsa kabili ngosuku. Inkambo yokwelashwa yizinsuku ezingama-7-10.
I-TUBERCULOSIS: Amahora amabili ngaphambi kokudla ngakunye, phuza amaconsi ama-20 we-tincture. Ngemuva kwehora, "jam" i-tincture nge isipuni samafutha.
IHERPES, SEPSIS: Ukusakazwa kwe-beaver kuthathwa ngesonto eli-1 kathathu ngosuku ngamaconsi ayi-15.
IZIMBANGELA ZESUGAR: I-tincture yemaskre secretion ixubene ne-apple cider uviniga namanzi ezingxenyeni ezilinganayo. Ukuvunyelwa kwekhosi yinyanga eyodwa. Ithuluzi lithathwa ekuseni isipuni esisodwa,
I-KIDNEY INSUFFICIENCY: Uma kwenzeka ukwehluleka kwezinso, umthamo ukhethiwe ngokuhlukile ngokuqonde kobukhulu. Qala ngamaconsi ama-2-3 izikhathi ezi-2 ngosuku. Ngemuva kwalokho ungaletha amaconsi angama-15 bese ume lapho. Isifundo lesi sitholakele ngokuphelele.
IHepatitis kanye nepheshana esiswini: uhlelo lufaka izidakamizwa ezi-4: 1) ukukhishwa kwe-beaver, 2) i-bile bile, 3) uwoyela wamatshe, 4) ukufa kwezinyosi. I-Musk beaver idakwa ngamanzi noma ngetiye izikhathi ezintathu ngosuku, amaconsi angama-5-6.
I-Bear bile ithathwa njengehla ngethonsi eceleni "kwegquma" eliphakeme, kusukela kokwehla koku-2 izikhathi 2 ngosuku izinsuku eziyi-15 bese kuthi "egqumeni" elehlayo. T
e ngosuku 30, 1 iconsi kabili ngosuku. Izifundo ezimbili kuphela, izinyanga ezi-2 ezinekhefu lezinsuku ezi-5 phakathi kwezifundo.
Amafutha amatshe adakwa ngamanzi. 1 ml yokugxilisa ihlanjululwe nge-1.
Malitha ama-5-2 wamanzi noma i-1 gramu kawoyela owomile ngamalitha ayi-2-3 amanzi. Nge-hepatitis C, lolu hlelo lusetshenziswa izikhathi ezi-2 njalo ezinyangeni eziyisithupha, bese uphinde uphinde uphinde wenze ezinye izifundo ezimbili.
ISIFO SEPHEPHA: Phuza isipuni ekuseni, kusihlwa esiswini esingenalutho imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla kabili ngosuku. Inkambo yokwelashwa kuze kube yilapho useluleme ngokuphelele.
Lokhu okuqukethwe okuluhlaza kunamagama amaningi ahlukene: i-castroleum, i-beaver musk, umfula we-beaver, umfudlana we-beaver. Izinto ezinjalo, ezikhiqizwa i-secretory gland of beaver, zibonakala ngombala onsundu kanye nephunga le-musky. Kudala isetshenziswa ngabantu futhi kutholakala kakhulu kulezi zinhlobo ezilandelayo:
I-infusion yenziwa ngesisekelo sotshwala noma i-vodka,
I-Powder, esetshenziselwa ukulungisa izicucu
Amafutha awalungiswa kangako, futhi ukuwathola kuba nobunzima obuthile,
Amakhandlela angalungiswa ngokwawo.
Imvamisa, le ndwangu eluhlaza isetshenziselwa i-neurosis, isifo senhliziyo, ikhanda kanye ne-pancreatitis.Izinto zokupheka ze-Beaver musk zinezinto ezizuzisayo:
Imiphumela yokulwa nokuvuvukala lapho kuvezwa ukusha, ukulimala, izifo zesikhumba esihlanzekile, nge-psoriasis, kusiza ukuqeda izilonda ezihlanzekile esikhathini esifushane,
Izici zokuphikisana nomfudlana we-musky zibonakaliswa eqinisweni lokuthi zichitha ngokuphelele izinhlobo ezahlukene zokuvuvukala - inyumoniya, i-pyelonephritis, i-prostatitis, i-sinusitis, isifo sofuba, njll. Ngaphezu kwalokho, i-musk ijwayele ukungatheleleki komzimba, okunomphumela omuhle esimweni esejwayelekile somzimba,
Isici se-tonic ukuthi i-tincture noma i-beaver powder isiza ukunqoba ukungabi namandla kwabesilisa futhi ijwayele ukusetshenziselwa i-adenoma yesibindi, kufakazelwa ukuthi i-tincture ingakhuphula i-testosterone, enomphumela omuhle ekwandeni kwe-potency emadodeni,
Izici zokuphinda zenziwe kabusha kwendlala yemisipha ye-beaver zibonakaliswa ekwakhekeni kwekhambi elinamanzi, okuthinta ngokuphumelelayo umsebenzi wokujikeleza kwegazi, ukusetshenziswa njalo, imithambo ye-venous iyaqinisa, ukuxazululwa kwegazi kwakudala,
Impahla ye-antispasmodic ibonakaliswa lapho kusetshenziswa ukumnika ngesikhathi somcimbi we-spasmodic nge-gout,
Izici ezipholile zibonisa iqiniso lokuthi i-tincture yokusakaza isilinganisa isimo sabantu semizwa. Leli khambi linikeza isilinganiso samandla, ngaphandle kokubanga ukozela nokukhathala. I-tincture yale nto ingumkhiqizo wemvelo ongabangeli imiphumela emibi.
I-tincture yemikhiqizo eluhlaza enobuhlalu inethonya lokuphulukisa ekuhlulekeni kwenhliziyo, i-arrhythmias. Yini elapha i-musk gland:
nge-hypertension noma i-hypotension,
ukululama ekushayweni unhlangothi, ukuhlaselwa yisifo senhliziyo noma ukukhubazeka,
Cishe amasonto amabili ngemuva kokufaka isicelo, umuntu ubona imiphumela eminingana emihle: ukwehla kokuvuvukala, ukunyamalala kwemizwa ebuhlungu nokususwa kwezinqubo zokuvuvukala.
Amantongomane ephayini ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 ngamakhambi abantu ekhaya kubhekwa njengokunye kokudla okuwusizo kakhulu kwesitshalo. Kunezizathu eziningi zalokhu. Izithelo zomsedari ziqukethe amavithamini wamaqembu ayi-5, okunamafutha acid kanye nezinto zomkhondo.
Kulabo abahlushwa ushukela omningi wegazi, i-thiamine - uvithamini B kubaluleke kakhulu. Yile ngxenye ebhekene nokuqhekeka okukhulu kwama-carbohydrate emzimbeni womuntu.
Emzimbeni ophilile, umthamo wansuku zonke we-thiamine ukhawulelwe ku-2 mg, kanti isiguli esincike ku-insulin sinesidingo esibi sale nto, ngoba sidinga okuningi. Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngamakhambi abantu, ikakhulukazi, amantongomane ephayini, kukuvumela ukuthi uthole i-thiamine eyanele ukwenza ushukela wakho wegazi ube ngokwejwayelekile.
Amafutha omsedari nawo ayazuzisa kushukela. Inesethi efanayo yezakhi ezinamantongomane aphelele, kepha ingagcinwa isikhathi eside futhi ilula ukuyisebenzisa.
Kukhona nezinye izindlela eziningi ezisebenzayo nezisebenzayo zabantu abanesifo sikashukela. Ukuze singagcini ngemininingwane ngayinye, sizikhawulela kuhlu lwezakhi zokwelapha zendabuko zokwelapha kwabantu ezimweni zokuphazamiseka kokukhiqizwa kwe-insulin:
Amafutha efilakisi nefilakisi, nefilakisi,
Ijikijelwe kalamula ngesisu esingenalutho,
Ijusi nomhluzi we-oats okusanhlamvu,
50% isisombululo sokutshala i-alfalfa,
Imvubelo eyomisiwe yokomisa utshani
Ama-birch ne-lilac, amiswe emanzini abilayo,
Isifanekiso samaqabunga obhontshisi,
Iqoqo le-herbal le-dandelion, i-nettle, i-burdock ne-cuff,
I-horseradish ethosiwe obisini
Ufulawa we-Buckwheat noma i-bran nge kefir,
Garlic kanye anyanisi umhluzi kubhiya.
Zonke lezi izindlela zokupheka ngezinga elithile noma kwenye zisiza ukuguqula okuqukethwe koshukela futhi kuqede ukugxuma kwalo okungazelelwe.Kodwa-ke, ekwelashweni kwesifo sikashukela i-mellitus ngamakhambi abantu, ukudla, ukudla okunempilo kanye nendlela yokuphila enempilo kufanele kuhlonishwe kunoma yikuphi.
Inombolo yeresiphi. Kuyadingeka ukuthatha u-1 gramu we-spray powder futhi udle izikhathi ezi-3 ngosuku. Kungcono ukuphuza isiphuzo sekhofi,
Inombolo yeresiphi 2. Izindlala ze-beaver ezilungiselelwe zidwengulwa zibe yi-powder noma zihlukaniswe izingcezu, cishe u-1 gram ngayinye, bese isetshenziswa ngendlela efanayo nakwiresiphi yokuqala. Ubuhle bale iresiphi ukuthi uzobona umsuka wemvelo wokusakaza kwe-beaver,
Inombolo yeresiphi 3. Thela amamililitha ayi-400 we-70% yotshwala kuma-gramu ayi-100 wesitoko esomile noma esomile. Vala isitsha sengilazi ngokuqinile bese ushiya izinsuku eziyi-10 endaweni emnyama neyomile. Futhi, le iresiphi ikuvumela ukuthi usebenzise i-vodka, kodwa-ke kufanele ukhuphule ivolumu iye kuma-milliliters angama-500,
Inombolo yeresiphi 4. Ukwenza amakhandlela, gaya umusk bese uhlangana norenti engancibilikisiwe, bese upholile futhi wakhe amakhandlela amancane, le iresiphi ilungele owesifazane ophethwe yizifo zabesifazane,
Inombolo yeresiphi 5. Ukulungisa amafutha, ancibilikisa ngama-gramu angama-200 webhere noma amafutha e-badger, engeza amagremu ayi-100 we-beaver stream powder emafutheni ancibilikisiwe, ubambe ingxube ephumelelayo imizuzu eyi-10 kubhavu wamanzi, bese upholisa yonke ingxube futhi usebenzise ezindaweni zokuthola izindawo ezibuhlungu. Ungasebenzisa i-oyili kube kanye ngosuku, ngamanani amancane.
Kodwa-ke, okunye ukwephulwa kufanele kubhekwe, ukusakazwa kwe-beaver angeke kusetshenziselwe izingane, abesifazane abakhulelwe, abantu abane-hepatitis, izidakwa. Udinga ukusondela kahle kwinqubo yokuthi ungawenza kanjani ama-tincture, okokugcoba namakhandlela.
Ukusakazwa kweBeaver: ukubuyekezwa kodokotela
Ukusakazwa kwe-beaver kuyinto secretion yangaphakathi ye-beaver, into elimnandi lemvelaphi yezilwane.
Izici ezibalulekile ze-beaver jet zibhekwa njengezisetshenziswa zezokwelapha ngesimo se:
i-benzoic carbon dioxide
Ukudakiswa kotshwala (i-tincture) yomfudlana we-beaver kuyinto yokulungisa iphunga, elisetshenziswa kabanzi kumakha. Ingasetjenziswa njengomuthi we-antispasmodic nowokuphumula emithini yemithi.
Ijetti ye-beaver yayihlala ibhekwa njengomuthi ovela kukho konke ukugula. Eqinisweni, lesi akusona neze isidakamizwa. Le nto yandisa amandla omzimba, iqinisa amasosha omzimba, futhi umzimba, umzimba, usebenzisa amabutho ukulwa nezifo ezahlukahlukene.
I-Polysorb yesifo sikashukela mellitus hlobo 2 kanye.
Izivakashi ezingama-86 zicabanga ukuthi le ndatshana iyasiza. Amavoti angama-86 esewonke.
Wamnika i-vial ye-Beaver Jet Water Extract. Uma unesifo sikashukela, khona-ke uzokuzwa impendulo enjalo evela kunoma yimuphi udokotela noma.
Amafutha afakwa endaweni yobuthakathaka, ayakha ngenkuthalo. Amanxeba, ukulimala kanye nokulimala, ukuvuvukala namakhaza, izifo kanye nezifo, kanye nokugula kwengqondo okukhona isikhathi eside - lolu uhlu olungaphelele lokuthi umsizi we-beaver usiza ngani.
Kepha esimweni ngasinye, ukwelashwa kungamuntu ngamunye futhi kungaqhubeka unyaka wonke, ngamakhefu amafushane phakathi kwezifundo zokuphuza umuthi. Futhi lokhu kungasho ukuthi izinqubo eziyinkimbinkimbi kangaka zokubona komuntu okulula njengokujwayeza ukwakheka kwegazi lipid nokwenza ngcono ukujikeleza kwegazi, ukuvimbela ukwakheka kwezigcawu ze-atherosclerotic emikhunjini.
Namuhla, i-tincture evela emfudlaneni we-beaver ingathengwa kalula isilungiselelwe, kepha-ke, ukuze uqiniseke ngekhwalithi yayo, kungcono ukugcizelela umkhiqizo owomile noma ongavuthiwe wena.
Ochwepheshe bethu bakulungele ukufundwa kokwakheka okuyinkimbinkimbi kwamakhemikhali nokuphulukisa izakhiwo zomfudlana we-beaver, kufaka phakathi amandla okusebenzisa kwawo i-oncology. Ijetti ye-beaver ithathwa ngaphandle nangaphakathi ngesimo sokugcotshwa, ukugcotshwa, impuphu, kanye nama-tinctures ajwayelekile kakhulu.
Ungathatha i-powder eyomile, kepha ngamanani amancane kakhulu (mayelana nosayizi wekhanda lomdlalo).Ukusetshenziswa komfudlana we-beaver kushukela kunomphumela omuhle kakhulu ekugxilweni kwe-glucose egazini labanesifo sikashukela.
Le mikhiqizo iyadingeka futhi ilusizo kuzo zombili iziguli ezinesifo sikashukela futhi ezinempilo, ngoba lapho inqubo yokugayeka kokudla iba ngamafutha angcono kakhulu emvelo, ingasaphathwa eyokuthi kuvela kubo ukuthi sithola inqwaba yamavithamini, amaminerali nefayibha yezitshalo.
Ukwelapha Umdlavuza. Isifo sikashukela mellitus.
Ukungazali Futhi abanye. Ukusakaza kwe-Beaver, senza i-tincture, konke mayelana ne-tincture kusuka ekusakazweni kwe-beaver.
- Isikhathi. Isikimu esifanayo sisetshenziselwa ukufakwa kwamehlo nezindlebe.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi ubekezelele ukubekezelelwa kwesiguli ngakunye kwento ngokwayo nezinye izinto ze-tincture. E-Russia, izindawo zokuphilisa zomsinga we-beaver bezaziwa isikhathi eside kakhulu.
Ukwelashwa kwenziwa kanye noma kabili ngosuku kuze kube yilapho izinhlungu ziphela. Akunaziphikiso ezikhethekile zokwelashwa ngomjelo we-beaver, kepha, njenganoma yiluphi olunye ikhambi, kuyadingeka ukulandela ngqo umthamo, obekiwe ngokuya ngobude nesisindo somuntu, uhlobo lwesifo.
Umsebenzi we-biological and ngokomzimba womsinga we-beaver awuqondakali kahle, kepha umsebenzi wesayensi kulokhu uqhubeka. Kumele kuqashelwe ukuthi ukugcizelela ukusakazwa kwe-beaver eyomile kushesha kunokumanzi.
Kukhona iresiphi eyodwa kuphela yokuthi ungalungisa kanjani i-tincture emfudlaneni we-beaver: I-iron eyomile echotshoziwe ithululelwa nge-vodka esezingeni eliphakeme noma utshwala bezokwelapha obuhlanjululwe bufika ku-45-50 °, ngokwesilinganiso esingu-100 g wejethi nge-500 ml koketshezi, ithelwa okungenani okungenani kusuka ku-100 g womkhiqizo owomile otholakala kusuka ku-0. , Ama-hoods ayi-8 kuye ku-1,2 l.
Isibonelo, udle okuthile ekudleni kwemvelo, iparele noma ikhukhamba - ushukela oludingekayo uzongena egazini ngezingxenye ezincane, ngokungafani noshukela otholakala ku-chocolate, ozoba segazi lakho cishe khona manjalo.
Ukwakheka kwamakhemikhali komfudlana we-beaver kungahluka, kuya ngendawo yokuhlala ye-beaver, inkathi, njll.